Cubot KingKong5Pro သည်ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Android 11 ပါသောမိုဘိုင်း Androidsis
Manuel Ramirez | | Android ထုတ်ကုန်များ
ကျနော်တို့ပြီးသားရက်အနည်းငယ်စကားပြော Cubot KingKong5Pro ကိုရောက်ရှိခြင်း စျေးကွက်သို့၎င်းင်း၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်သူနှင့်သူတို့အားတောင်းဆိုသောပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင်သန်ရန်ဒီဇိုင်း.
1 ကျွန်ုပ်တို့သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခက်ခဲသောမိုဘိုင်းကိုတောင်းဆိုသည့်အခါ Cubot KingKong5Pro
3 Cubot KingKong5Pro ၏အခြားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
4 သင်၏ဒီဇိုင်း (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခက်ခဲသောမိုဘိုင်းကိုတောင်းဆိုသည့်အခါ Cubot KingKong5Pro
ကျနော်တို့ကခုခံမှုကနေစမယ်။ ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ဟာခက်ခဲတဲ့မိုဘိုင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်၊ မည်သည့်အရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စွန့်ခွာသည်ကိုဂရုပြုရန်လိုသည်။ ၎င်းတို့သည်မျက်နှာပြင်ကိုခြစ်ရာနိုင်သည့်မည်သည့်ဒြပ်စင်နှင့်မဆိုအမြဲဂရုစိုက်ပါ။
El Cubot KingKong5Pro သည်အသိအမှတ်ပြုခံရသည် IP68 နှင့် IP69K နှင့် MIL-STD-810G။ ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာရေစိုခံနိုင်သော ၁.၅ မီတာအရှည်ရှိပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဲသို့မဟုတ်ဖုန်များကြောင့်ရိုက်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေတံခွန်များတွင်အလွန်မခံစားရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ချနိုင်သည်။
ဒီအမျိုးအစားမိုဘိုင်းကိုဝယ်ယူဖို့ငါတို့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲဒါကဒါကိုပဲပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ positioning ကိုစနစ်များနှင့်အတူ GPS၊ GLONASS နှင့် Beidouတောင်ကြီးသို့သွားခြင်း၊ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများသို့သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးသောအရာမှ ဤတွင် Cubot ဖြန့်ချိသောဤမိုဘိုင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုစိတ်ချနိုင်သည်။
Cubot KingKong5Pro မှကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် ၎င်းတွင် 8.000mAh ဘက်ထရီပါရှိသည် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒါကို load ကနေရွှေ့ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်ခြင်းများသို့သွားပါကလျှပ်စစ်ကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဘက်ထရီချွေတာခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ပြproblemsနာများမရှိဘဲနာရီနှင့်နာရီများကိုမဆက်သွယ်ဘဲအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည်။
ငါတို့သည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းပြောဆိုကြသည် ထိုအခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်နာရီ ၅၅၀ အနားယူနိုင်သည်; သို့တည်းမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်များကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီးအဆက်ပြတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံနှင့်အခြားဂိမ်းများကိုဝါသနာအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရန်မိုဘိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွဲပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် နှစ်ရက်ဘက်ထရီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချပါ.
ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ စိတ်ချစေရန် Cubot KingKong5Pro Android 11 ရှိတယ်; Android စနစ်သည်ဘက်ထရီအတွက်မည်မျှအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ထရီအတွင်းရှိ mAh တစ်ခုချင်းစီကိုအမြင့်ဆုံးအသုံးချနိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကောင်းသိသည်။
Cubot KingKong5Pro ၏အခြားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ပါ မိုဘိုင်းတစ်လုံးသည်ခုခံမှုနှင့်ဘက်ထရီဖြစ်သည်၊ သို့သော်အခြားဒြပ်စင်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည် ဓာတ်ပုံလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့တောင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်သွားကြပြီးထိုရှုခင်းများ၏ဓာတ်ပုံကောင်းများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများပင်မှတ်မိရန်အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဘက်ရှိသုံးဆဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည် 48MP AI မှန်ဘီလူး, အခြားတစ်ခုသည် macro ဓာတ်ပုံများအတွက် 5MP နှင့်အခြားအထိခိုက်မခံသောဓာတ်ပုံများအတွက် 0.3MP ဖြစ်သည်။ selfie များ၏မျက်နှာစာတွင် ၂၅MP အထိရောက်ရှိပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားမည့်ရှုခင်းများ၏အလွန်ကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးနိုင်သည်။
ဤ Cubot ဖုန်းအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ Android 11, 4GB RAM၊ 64GB Internal Storage, NFC နှင့်ပင် Google Pay ကို။
ငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုထားခဲ့ပါ သင်ဘယ်လောက်ဓါတ်ပုံတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်နိုင်လဲ ဒီတော့ Cubot မှခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်း၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောအသေးစိတ်ကိုသင်တွေ့ရသည်။
ယခုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်း၏စျေးနှုန်းကိုမေးရန်သင်ဒီမှာရောက်လာသည်။ ဒါပါ ယူရို ၂၁၅.၃၄ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်.
En ဝယ်ယူ link ကိုဒီကနေဖြစ်ပါတယ် Aliexpress.
ငါတို့လည်းအလျင်အမြန်မသွားချင်ကြဘူး၊ ကြောင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုကြာမြင့်စွာန်းကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်, ဒါကြောင့်သင်ဟာဒုတိယနေထိုင်ရာနေရာမှာနေထိုင်ဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကို ၀ ယ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုလျှင်ဖုန်းတစ်လုံးရဖို့သိပ်မကြာပါဘူး။
Cubot KingKong5Pro မှသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိနိုင်သည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » Cubot KingKong5Pro သည် Android 11 ပါ ၀ င်သောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
watermarks ကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း ၆ ခု